Sida loo soo celiya tirtiray fayl ka External Hard Drive
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray fayl ka External Hard Drive
Khasaaraha Data dhici kara
Dadka bilaabin isticmaalka drive dibadda adag iyo aad u badan inta badan. Kaliya fiiri aan tarxiilaan: uu saarata movies oo dhan jecel, E-buugaagta, iyo macluumaad shakhsi ah oo uu drive dibadda adag. Inkastoo aan ogahay sababta uu u jecel yahay drive ay u badan, waxaan la yaabanahay hadii uu waalan tagaa marka dhammaan xogta ku saabsan drive ka lumo. Xitaa hadii uusan waalan tegi lahaa, laga badiyay xog qiimo leh waa qaracan badan. Kaliya Waad qiyaasi kartaa waxa haddii aad laga badiyay oo dhan uruuriyaa sano aad ugu jecel yihiin.
Dhab ahaantii, wax la mid ah in uu dhici karo. Markii uu doonayay in ay tirtirto mid file, laakiin si qalad ah la tirtiro folder oo dhan; markii uu si dhaqso ah u riixriixan 'wareeg + Del', laakiin helay in ay jirto ma ahaa gurmad kasta; ama file ka dhammaatay ay sabab u tahay hawlaha dadka kale qalad, ka dibna uu ka lumay xogta. Sida loo sameeyo dib u soo kabashada folder?
Hab fudud inuu ka soo kabsado fayl la tirtiro
Marka ay tani dhacdo, waxa ka soo bixi, annagoo maanka ku waa soo kabashada xogta ah. Taasi waa in la yidhaahdo, oo isticmaalaya kabashada xog ah in ay soo kabsadaan folder tirtiray codadka doorashada weyn, sida Wondershare Data Recovery , barnaamij soo kabashada xogta xirfadeed oo la isku halayn karo leh tayo sare iyo ammaanka. Iyada oo kaliya 3 tallaabo, waxaad soo kaban karto, galalka aad tirtiray dhaqso ah oo hufan, iyo ma-casriga ah xirfadaha loo baahan yahay. haddii aad tahay user Mac ah, fadlan dooro ee Data Recovery for Mac (la heli karo Mavericks), taas oo la mid ah sameeya.
Talooyin: HA dajiyo barnaamij ku saabsan xijaab il meesha aad ku socoto inuu ka soo kabsado xogta lumay.
Tallaabada 1. Isku aad drive dibadda adag tahay in kombiyuutarka iyo abuurtaan kabashada xogta. Dooro kabashada File Khasaaray dadka isticmaala Windows ama Recovery File masaxay u isticmaala Mac.
Tallaabada 2. Dooro drive ka adag oo uu bilaabo inuu iskaan.
Tallaabada 3. Ka dib markii baaritaan, Xiisaha iyo eego faylalka recoverable oo uu bilaabo inuu ka soo kabsado.
Halkan waxa aad si xor ah u wareegi karaa dhexeeya "Nooca File" iyo "Jidka" ee faylka. The "Nooca File" kala files galay qaybaha cad sida sawirada, video, audio, waraaqaha, email, iwm, halka "Jidka" aad soo bandhigaysaa faylasha sida meesha uu asal on your computer.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay in fiiro gaar ah waa: Ha badbaadiyo files soo kabsaday meeshiisii ​​bannaanayd ahayd, halkaas oo aad ka badiyay faylasha aad hore, oo kaliya in ay tixgelin ammaan ah.
Waxyaabaha aad ogaanaysid: Waxaad ogaataan xaqiiqada ah in laga badiyay xogta aan si joogto ah tirtiraa, ilaa xogta cusub u overwrites. Waxa aad u haysato in aad maskaxdaada waa in aadan badbaadin wixii xog ah oo cusub si ay meesha aad badiyay xogta muhiimka ah, ama xogta la lumay overwritten doonaa dad kale, oo sidaas awgeed ay adag tahay inuu ka soo kabsado folder tirtiray.
Video tutorial soo kabashada folder